फेसबुकमा कस्तालाई साथी बनाउने, कस्तालाई नबनाउने ? | News Nepal
स्टाटस चोर : यिनीहरूले अरुका राम्रा–राम्रा स्टाटस चोरेर आफ्नो टाइम लाइनमा कपी पेस्ट गर्छन् । यस्तालाई हटाउने मात्र होइन, ब्लक नै गरी दिए पनि हुन्छ । यिनीहरूलाई बौद्धिक चोर पनि भनिन्छ ।
बिजनेसखोरी : यो कोटीमा पर्ने मानिसहरूले सधै फेसबुकमा आफ्नो बिजनेसको प्रचार मात्र गरिरहेका हुन्छन् । मेरो होटलमा यति छुट छ, मेरो कन्सल्टेन्सीमा आउनु, मेरो ट्रेनिङ सेन्टरमा निमन्त्रणा आदि । हुन त सामाजिक सन्जालबाट व्यवसायिक फाइदा लिनु राम्रो हो तर सधंै त अरूलाई पनि वाक्क लाग्छ नि हौ ।
क्यान्डिक्रस क्रेजी : कहिलेकाहीँ नोटिफिकेसन आउँछ अनि खोलेर हेर्दा फलानो invited you to play candy crush भन्छ । यदि यस्तो आयो भने त्यो व्यक्तिलाई सिधै ब्लक नगर्नुहोला किनभने त्यो भाइरसले गर्दा पनि हुन सक्छ । कहिलेकाहीं क्यान्डी क्रस खेल्नेहरूले आफ्नो लेवल बढाउन निमत्रणा पनि पठाउँछन् । यिनीहरूका लागि नोटिफिकेसन अफ गरिदिए पुग्छ ।
गुनासोगिरी : यो कोटीका मानिसहरू सधैं गुनासो गर्छन् । बिजुली गयो उफ, मोबाइलमा चार्ज सकियो उफ, गर्मी भयो उफ, पेट दुख्यो उफ, झरी पर्यो उफ, हावा चल्यो उफ ! यस्ता कुराले आफ्नो पनि मनस्थितिमा प्रभाव पार्ने भएकाले यस्ता मान्छेलाई फेसबुकबाट हटाउनु नै बेस हुन्छ । साप्ताहिकबाट
प्रकाशित मिति : 2018-12-28